Kildare - N'ime obodo
Chọpụta obodo katidral oge ochie nke Kildare na ọmarịcha County Kildare. Zute ịnyịnya mara mma nke ọma na Irish National Stud ezinụlọ ma ọ bụ na-agagharị n'ime ogige ndị Japan dị n'udo. Gbago ụlọ elu dị otu puku afọ maka nlele dị egwu ma ọ bụ gaa na Katidral St Brigid. N'abalị, banye n'ime obodo na -ekpo ọkụ wee lelee menus mmanya na -atọ ụtọ n'ụlọ mmanya, tupu ịgba egwu n'abalị.
Obodo Kildare malitere na 5th narị afọ wee wepụta aha ya na Gaelic, Cill Dara nke pụtara Church of Oak, ebe obibi ndị mọnk nke St Brigid hiwere na saịtị n'okpuru osisi oak. Obodo a nwere ihe nketa na akụkọ ihe mere eme yana 19 mbụth Ụlọ ahịa narị afọ na-enye ntakịrị ihe nleba anya n'oge gara aga site na ahụmịhe eziokwu mebere nke ọma, nnukwu mmalite maka nleta gị. St Brigid's Cathedral na Round Tower dị nso - ụlọ elu ahụ guzoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 33 ma bụrụ ụlọ elu ugwu kachasị elu na Ireland, ị ga-ahụ na ị ga-ahụ ọmarịcha obodo na Curragh Plains. Ọdịda St Brigid bụ obere njem site na nleta na Solas Bhride Hermitages ga-akọ akụkọ ya. Ọsọ ụgbọ ala mba ụwa mbụ a ga-eme na Britain ma ọ bụ Ireland, iko Gordon Bennett, gafere Kildare. N'oge ọgbara ọhụrụ, obodo ahụ bụ ebe ndị na-azụ ahịa na-aga na Kildare Village na maka ọmarịcha ụbọchị na ama ama Irish National Stud na ubi.
Ebe nlegharị anya kacha mma na Kildare
Na-arụ ọrụ ugbo ugbo bụ nke ama ama Japanese Gardens, St Fiachra's Garden and Living Legends.
Kporie uzo izu ahia di elu na Kildare Village, juputara na 100 boutiques na-enye ego di egwu.
Ebe egwuregwu a pụrụ iche na -enye ngwugwu zuru oke maka ndị na -anụ egwuregwu ọgụ na mmemme adrenalin na -akpali akpali.
Justmụ agbọghọ Naanị Nwee Obi …tọ. Dị Kildare !!
Ihe iri di uku ime gburugburu Kildare Town & Newbridge
Ihe ijuanya 7 nke Kildare oge ochie
Isi ihe ise ị ga - eme na izu ụka gị na Kildare
Akụkọ mgbe ochie nke Kildare Virtual Reality Tour
Osisi Killinthomas - Nke a bu Niczọ Ezinyere Nature Na Ireland?
Kildare dị nsọ
Chọpụta ihe ndị ọzọ na Kildare
Nọrọ na Barrow Blueway
Isiri onwe nriEzigbo ezinụlọ
Pubs & Ndụ abalịỤlọ ahịa Gastro-Pub
Pubs & Ndụ abalịỤlọ ahịa Gastro-PubIme ụlọ naanịokomoko
Katidral St Brigid & Round Tower
Ihe nketa na akụkọ ihe mere emeỤzọ ụkwụ
Ogwe ụlọ oriri na ọloụ Galụ Gallops
Ọzụzụ Racing Academy Ireland
Onye na-agba ịnyịnya KildareKwado Mpaghara
Obodo Tidy Monasterevin
Bog nke Allen Nature Center
Ordzọ Gordon Bennett
Okporo Ụzọ Ihe Nketa Kildare Town
Okporo ụzọ Monastic Kildare
Lily & Anụ ọhịa
Ihe omuma ihe omuma & ihe nlere
Adventure & IheKwado Mpaghara
Adventure & IheNwee ezumike ezinụlọ
Pubs & Ndụ abalịNri oririIme ụlọ naanịEzigbo ezinụlọ
Ihe nketa na akụkọ ihe mere emeIsiri onwe nri
ụlọ oriri na ọṅụṅụỤlọ ahịa Gastro-Pub
Nkwụsị 14 Mayfield
OutdoorsNwee ezumike ezinụlọCafes
Ihe nketa na akụkọ ihe mere emeUseslọ & Ubi
Akụkọ banyere Kildare
Ịzụ ahịaBọchị mmiri ozuzoCafes
Bed & Breakfastmmefu ego
Ịzụ ahịaCafesNri oriri n’èzíIme ụlọ naanịmmefu ego
Ugbo Castleview B&B